चिनियाँहरुको चासोलाई हामीले अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन: डा. राजन भट्टराई « Bagmati Page
चिनियाँहरुको चासोलाई हामीले अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन: डा. राजन भट्टराई
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको बताउँदै निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास दिलाएका छन् । यद्यपी संसद विघट्नविरुद्ध अदालतमा परेको रिटको विषय अहिले पनि विचाराधिन रहेको उनले बताए ।
आज (बुधबार) राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै डा. भट्टराईले भने, ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधानतः निर्वाचनको घोषणा गरिसक्नुभएको छ । वैशाख १७ र वैशाख २७ गते गरि दुई चरणमा निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ ।’
उनले बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले ‘मैले सरकार चलाउन सकिनँ, म निर्वाचनमा जान्छु भन्न नपाउने ?’ भन्दै प्रश्न समेत गरे । डा. भट्टराईले थपे, ‘सिटिङ प्राईममिनिस्टरले निर्वाचनमा जान्छु भन्न किन नपाउने ? पहिलो यो बहुमतप्राप्त सरकार हो । संसदभित्र विकल्प छैन । निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने विषयमा हामी अन्यौलतमा रहनु हुँदैन ।’
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीकाे टाेलीकाे नेपाल भ्रमणबारे पनि उनले थप स्पष्ट पारे । नेपालमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घट्नाक्रमबारे वैदेशिक मुलुकहरुको चासो हुनु स्वभाविक भएको उनको धारणा छ । उनले भने,‘चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणबारे विभिन्न चासो उठाएका छन्, हाम्रो आन्दोलन स्वतन्त्र रुपमा अघि बढेको हो । हामीले कसैको धुरी लिएका छैनाैँ ।’
डा. भट्टराईले नेपालको सबैसित राम्रो सम्बन्ध रहेको र सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहेका पनि उल्लेख गरे । उनले भने,‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छु । भारतीयहरुसँग पनि राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौँ । हामी सबै देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ । तर हामी आन्तरिक मामिलामा निर्णय लिँदा हामी स्वतन्त्रपूर्वक लिन्छौँ ।’